Labo nin oo ganacasto Soomaali ah ayaa lagu dilay xalay dalka Koonfur Afrika ka dib markii ay weerar ku soo qaadeen kooxo burcad ah oo dalkaas u dhashay.
Weerarkan ayaa ka dhacay degaanka Elsis oo ka mid ah xaafadaha ay Soomaalida ka degan tahay ee magaalada Cape Town.
Goob joogayaal ayaa sheegay in burcada oo watay gaari ay u yimaadeen labada ruux ee la dilay oo taagan ilinka hore meheradooda ganacsi, iyagoo iska soo dhigay dad wax ka iibsanaya Dukaanka.
“Waxay si lama filaan ah ugu fureen rasaas labada wiil ee Soomaalida ah taasoo keentay inay ku geeriyoodaan goobta qof 3aad oo la joogay ayaa ka badbaaday Weerarkaasi iyadoo Burcadiina goobta ay ka baxsadeen” sidaas waxaa saxaafada u sheegay mid ka mid ah Soomaalida ku nool magaaladaas.
Booliiska Koonfur Afrika ayaa gaaray goobta lagu dilay wiilasha Soomaaliyeed kuwaasoo Soomaalida ka caawiyay inay meydadka ka qaataan halkii weerarka uu ka dhacay inkastoo aysan ku guuleysan soo qabashada burcadii dilka geysatay.